Indlu yokutshona kwelanga eMonte Alentejano - I-Airbnb
Indlu yokutshona kwelanga eMonte Alentejano
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguCatarina Guerreiro
UCatarina Guerreiro yi-Superhost
Indlu yelizwe, ibuyiselwe ngokupheleleyo. Ilungele abantu ababini kodwa inokuthatha abane.
Ifumaneka kwiMonte Porteirinhos, enabemi abamalunga nama-30, iikhilomitha ezili-11.2 ukusuka e-Almodôvar, le ndlu, ifunyenwe kwisisele sengqolowa sekhulu leminyaka, yamkelekile kwaye ixhotyiselwe ngokupheleleyo intuthuzelo yakho.
Ithafa elinelanga kakhulu eline barbecue.
I-WiFi ephathekayo enomlinganiselo we-30GB wetrafikhi.
Wamkelekile kwaye wonwabele ukuzola, umoya omtsha kunye nembonakalo yomhlaba ejikelezileyo.
Le indlu lokulala, kunye ngubo kunye esifubeni bagi, igumbi eliphilayo esililini isofa, ekhitshini yaxhobisa ngokupheleleyo (njengesicocisi, induction Isitovu, nokuba liziko lezonka, microwave, umatshini ikofu, iketile kunye ngetoaster) Indlu yangasese ubanzi., Kunye hlambi , isitya sokuhlambela, iWC, i-bidet kunye nokukhanya kwendalo. Umatshini wokuhlamba usegumbini lokuhlambela.
Inethafa elisemagqabini ejonge umhlaba kunye nelanga elininzi emva kwemini. Kukho iiparasols zomthunzi kunye neendawo zokuphumla zelanga ezimbini.
Yinduli enabemi abambalwa, enethaveni kuphela ebonelela ngokutya kunye neziselo. Uninzi lokuthengwa lungenziwa kubathengisi bemihla ngemihla abahamba ngeeveni (isonka, iziqhamo, igrosari, njl.).
Ilali yaseAlmodôvar ikumgama omalunga nemizuzu eli-10 ngemoto (i-11.2 Km) kwaye apho unokufumana zonke izixhobo ezivela kwiivenkile ezinkulu, iibhanki, iindawo zokutyela ezilungileyo kunye nedama lokuqubha likamasipala.
Umbuki zindwendwe ngu- Catarina Guerreiro
Njengomthetho, andikho kwindawo apho indlu ikhona.
Ndiyafumaneka ukuphendula nawuphi na umbuzo ngomyalezo.
Inombolo yomthetho: 94830/AL